रसिलो रसुवा हुँदै केरुङ यात्रा
सोमवार, कार्तिक ८, २०७८ ०४:३०:१० युनिकोड
विष्णु घर्ती ‘भनभनेली’पासाङ् ल्हामु मार्ग
काठमाडौँ–धुञ्चे सडक खण्डलाई पासाङ् ल्हामु राजमार्गको नामले चिनिन्छ । सम्वत् २०७५ साल कार्तिक महिनाको ६ गते रसुवा जिल्लामा सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्न त्यतातर्फ जाने साइत जु¥यो । म गुल्मीको मान्छे ५ गते बुटवलबाट सरासर काठमाडौँ आएँ । अर्काेदिन सबेरै माछापोखरी काउण्टरबाट गोसाँइकुण्ड यातायात प्रा.लि.को टाटा सुमो गाडीमा स्टाफ सागरमणिसँगै हिँडियो ।
धादिङ्को गल्छी आएर त्यहाँबाट विदुरतर्फ लागियो । काठमाडौँबाट रसुवा जान विदुर (बट्टार) सम्मका लागि टोखा र रानीपौवा हुँदै जाने थप दुईवटा वैकल्पिक मार्ग पनि छन् । यि दुई वैकल्पिक मार्गबाट जाँदा केही दुरी कम हुनाले समयको बचत हुन्छ । नुवाकोटको सदरमुकाम विदुर न.पा. हो । गल्छीबाट विदुर नपुग्दै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवीघाट आउँछ । यो पृथ्वीनारायण शाहको देहावशान भएको स्थल पनि हो ।
पृथ्वी नारायण र देविघाट
वि.सं. १९७९ मा जन्मेका ऐतिहासिक पुरुष पृथ्वी नारायण शाहको देहावसन १८३१ मा नुवाकोटको देविघाटमा भएको थियो । उनले १८०१ आश्विन १५ मा नुवाकोट विजय गरेका थिए भने नुवाकोटको प्रसिद्ध ७ तले दरबार र तिलंगा घर समेत यिनैले निर्माण गरेका हुन् । अहिले उनको सालिक बाटोको किनारमा रहेको स्कूलको प्राङ्गणको एक छेउमा रुखहरूको माझमा सुनसान अवस्थामा रहेको देख्न सकिन्छ । त्यसपछि बट्टार बजारमा पुग्दा गाडी त्यही रोकियो । दिनको १२ बजेतिर सबै जनाले खाना खाएपछि नुवाकोट र रसुवाको सिमाना वेत्रावतीतर्फ लागियो ।
नेपाल तिब्बत बीचको युद्धमा सन्धि भएको यो एक ऐतिहासिक स्थल हो । सन् १७८९ मा भएको केरुङ् सन्धि अनुसार तिब्बतले पहिलो पटकदेखिको बाँकी रकम नदिनु, नेपाली सामानको भन्सार बढाउनु, नुनमा धुलो मिसाउनु, नेपाली चाँदीको नयाँ मुद्रालाई अस्वीकार गर्नु, नेपालीले भोटमा व्यापारिक सुविधा नपाउनु र सन्धिको उपेक्षा गर्नु आदि कारणले दुवै देशबिच दोस्रो युद्ध भयो । सन् १९९१ मा दामोदर पाण्डे, बम शाह र देवदत्त शाहको नेतृत्वमा ४००० नेपाली फौजले तिब्बतको कुतीमा आक्रमण ग¥यो ।
नेपाली फौजले तिब्बतका धेरै भागमा विजय हासिल गर्दै गएपछि चिनियाँ फौजले तिब्बतलाई सहयोग गरी नेपाली फौजलाई वेत्रावतीसम्म फर्काएपछि वि.सं. १८४९ (सन् १७९२) मा नेपालबाट देवीदत्त थापा र चीनबाट जनरल टुङ् ट्वानको नेतृत्वमा वेत्रावती नदीको किनारमा सन्धि हुन पुग्यो ।
प्रदेश नं. ३ को उत्तरी भाग चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको राजधानीबाट नजिकको तर विकट हिमाली जिल्ला हो रसुवा । यहाँ प्रशस्त चरन क्षेत्र र भेडाच्याङ्ग्रा पाइनाले तामाङ् भाषामा ‘रसोवा’ भन्दाभन्दै अप्रभंश भई रसुवा भन्न थालेको विश्वास गरिन्छ । साथै ऐतिहासिक स्थल रसुवागढीकै नाममा रसुवा रह्यो भन्ने पनि छ । सबभन्दा होचो ६१४ मि.र सबभन्दा अग्लो लाङ्टाङ् हिमाल ७,२२७ मि. रहेको छ । १५४४ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । उच्च हिमशिखर, नाङ्गा पहाड, भीर, पाखापखेरा बढी मात्रामा मिलेर बनेको छ । ५००० मि.भन्दा माथि बाह्रै महिना हिउँले ढाकिने, २५०० मि.देखि माथी सधै हिउँदमा हिमपात हुने तथा पहाडी र वेंसी क्षेत्र ४५७ मि.देखि माथी रहेको छ । वेत्रावती, पैरेवेंसी, स्याफ्रुवेंसी, फलाखु खोला किनार आदि बेंसीहरू हुन् ।
अन्य प्रसिद्ध ताल तथा कुण्डहरूमा पार्वतीकुण्ड, सूर्यकुण्ड, भैरवकुण्ड, सरस्वतीकुण्ड, गणेशकुण्ड, जागेश्वर कुण्ड, दुधकुण्ड, रिभरकुण्ड पनि पर्दछन् । यसैगरी विभिन्न धार्मिक एवम् साँस्कृतिक रूपले महत्वपूर्ण मानिने मठमन्दिर, गुम्बा, गढी, धामहरू रहेका छन् । यहाँको मुख्य जाति तामाङ् र अन्यमा शेर्पा, घले, व्राम्हण, क्षेत्री, गुरूङ्, मगर दमाई, कामी र नेवार बसोबास गर्दछन् । यस जिल्लामा मूख्य बोलिने भाषाहरू तामाङ् र नेपाली हुन् । प्रतिनिधिसभा १, प्रदेशसभा २ निर्वाचन क्षेत्र तथा स्थानीय तह ५ वटा (गोसाईकुण्ड, आामाछोदिङ्मो, नौकुण्ड, कालिका र उत्तरगया गाउँपालिका) रहेका छन् । यहाँको जनसंख्या पुरूष २१,४७५ र महिला २१,८२५ गरी जम्मा ४३,३०० जना तथा घरधुरी ९,७७८ देखिन्छ । जनसंख्या वृद्धिदर ०.३३% र साक्षरता ५३.६% रहेको छ ।
बेत्रावती पुलबाट उकालो र रसुवा जिल्ला एकैसाथ शुरु भयो । कालिकास्थानसम्मको डाँडोमा नागवेली हुँदै गाडी गुडिरह्यो । वारिपारी नियाल्दै यात्रा गर्नका लागि रमणीय स्थलको रूपमा परिचित छ । त्यतैतिर नेपाली सेनाको सुरक्षा चेक जाँच पनि भयो । उकालो सकिएपछि पहाडको कच्ची बाटो तेर्छो शुरु भयो । केही वर्ष पहिले पक्की पनि गरिएको रहेछ स्याफ्रुबेंशीसम्म । भुकम्प तथा वर्षात यामको पहिरोले गर्दा बाटो अत्यन्तै अस्तव्यस्त भएको पाइयो ।
स्याउबारीमा रहेको रेडियो लाङ्टाङ्को छेवैबाट तेर्छो बाटो लाग्दावित्तिकै राम्चे गाउँ देखियो । अत्यन्तै सुन्दर लाग्ने गाउँ गरागरामा मिलेर बसेको बस्ती छ । त्रिशुली नदीको माथीपट्टी अप्ठेरो पहराको डिलमा गुजुमुज्ज भई अडिएको छ । सरकारी कर्मचारीहरूका लागि यो स्थान महत्त्वपूर्ण पनि छ । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीहरूमा भौगोलिक क्षेत्रको विभाजन गर्दा यस जिल्लालाई ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा विभाजन गरिएको छ । राम्चेभन्दा उत्तरी क्षेत्रलाई ‘ख’ तथा राम्चेसहित दक्षिणी क्षेत्रलाई ‘ग’ वर्गमा बर्गिकरण गरिएको छ ।
राम्चेपछि ग्राङ्, ठाडे, सोले हुँदै अगाडि बढियो । यहाँबाट उँधो हेर्दा त्रिशुली नदी निकै तल खोँच भएर सेती नदीझैं बगेको देखिन्छ । पारीपट्टी नुवाकोटका सुन्दर बस्तीहरू देखिन्छन् । तिनीहरूलाई भूकम्पका बेलामा निकै माथिबाट आएका पहिरा र बस्तीभन्दा तलबाट गएका पहिराले अत्यन्तै अस्तव्यस्त पारेको देखिन्छ । मन्दिरको ढोकामा धजा भुण्डाएजस्तो गरी भूकम्पका पहिराले नाजुक अवस्थामा पु¥याएका रहेछन् । आँखा र मोवाइलमा लोभलाग्दा दृष्यहरू कैद गर्दागर्दै लामटाङ् राष्ट्रिय निकुञ्जको रेड पाण्डा प्रवेशद्वार आइपुग्यो । त्यहाँ पुन नेपाली सेनाले जाँच पडताल ग¥यो । अझ विदेशी पर्यटकहरूलाई भुईमा झारेर शरीर तथा झोलाहरू एक एक गरेर चेक जाँच गर्दा रहेछन् ।
लामटाङ् राष्ट्रिय निकुञ्ज
नेपालको दोस्रो ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा २०३२ चैत्र ९ मा स्थापना भएको हो । यसको क्षेत्र रसुवामा ५७%, नुवाकोटमा ७% र सिन्धुपलाल्चोकमा ३६% पर्दछ । ३ वटै जिल्लाका साविक ३४ वटा गाविसमा १७१० वर्ग कि.मी. क्षेत्रफमा फैलिएको छ । यसले २९.८७% वनक्षेत्र तथा खाली जमिन, ताल, कुण्डले ६०.८७% क्षेत्र ओगटेको छ । यो पहिलो हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा जैविक विविधताको भण्डार पनि हो । यसलाई २०५५÷०१÷१४ मा ४१८.३ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफलको मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।
१००० मी. देखि ७,२४५ मी. उचाईसम्म फैलिएर रहेको छ । यस निकुञ्जमा मूख्य गरी रेड पाण्डा (हाब्रे), कस्तुरी, हिउँ चितुवा, सालक, आसामी बाँदर, डाँफे, मुनाल, आदि पाइन्छन् । त्यसैगरी १००० प्रजातीभन्दा बढी वनस्पति, स्तनधारी ४६, पंक्षी २५० बढी, उभयचर ११, माछा ३०, माकुरा प्रजाति १०, पुतली ५८ प्रजाति, वन्यजन्तु २१ (भलमझष्अ), थरी रहेका छन् । यहाँको मूख्य आकर्षणको रुपमा ४,८०० मिटरसम्मको उचाईमा विशेषगरी लामटाङ् क्षेत्रमा पाइने सरकारद्वारा संरक्षित जनावर रेड पाण्डा (हाब्रे), गोसाईकुण्ड (उचाई ४३६० मी.), लामटाङ् उपत्यका आदि स्थानहरू हुन् । २००७ सेप्टेम्बर २३ मा गोसाईकुण्ड र वरपरको क्षेत्रलाई रामसार सूचीमा सूचिकृत गरिएको हो ।
जिल्ला सदरमुकाम धुन्चे बजार समुद्र सतहबाट १९५० मि. उचाईमा अवस्थित छ । भिरालो जग्गा तथा प्रसिद्ध गोसाइँकुण्डको काखमा उत्तरतर्फ फर्केर रहेको छ । गणेश, लाङटाङ्लगायतका हिमालहरूबाट सोझै आएको हावा जोडतोडका साथ चल्दछ । ४३६० मी.को उचाईमा रहेको गोसाईकुण्डमा प्रत्येक वर्ष जनै पूर्णिमा अर्थात रक्षा बन्धनको दिन ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ । त्यहाँ पुग्नको लागि धुञ्चे हुँदै जानु पर्ने हुन्छ । त्रिशुलीको उद्गमस्थल प्रशिद्ध तीर्थस्थल गोसाँईकुण्ड हो । धुञ्चेको सिमाना हुदै भोटेकोशीमा समाहित भएपश्चात त्रिशुली नदीको नामले प्रवाहित हुन्छ । रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत गोसाईंकुण्ड धार्मिक र पर्यटकीय हिसावले महत्त्वपूर्ण ताल हो । सदरमुकाम रमणीय खालको छ । यहाँबाट हामी अगाडि बढ्दै गयौँ । बाटो उस्तै हो, ढुङ्गाहरू ठूलाठूला, खाल्डाखुल्डी धेरै, उफ्रिँदै उफ्रिँदै अगाडि बढियो । धुञ्चेको तलपट्टी गोसाइँकुण्डबाट प्रवाहित शुरुको त्रिशुली नदी बगिरहेको छ ।
वेत्रावती सन्धिबाट नेपाल असन्तुष्ट रहेको र उक्त सर्तलाई तिब्बतको तर्फबाट पनि उपेक्षा गरिएकोले सन् १८५५ मा भएको तेस्रो युद्धमा तिब्बतको नराम्रोसँग हार भयो र २४ मार्च १८५६ (वि.सं. १९१२ चैत्र १) नेपाल र तिब्बत बीच थापाथली सन्धि भयो । तर यो सन्धि अनुसार पनि समस्या समाधान नभएकाले रणोद्धिपको पालामा वि.सं. १९४१ जेठ २ गते अर्काे रसुवा सन्धि भई उक्त समस्या समाधान गरिएको थियो ।
रेन्बो ट्राउट उच्च पहाडको चिसो पानीमा हुर्कने मांसाहारी माछा हो । यसका लागि सामान्यतया २००अ देखि तल र ८०अ भन्दा माथीको तापक्रम आवश्यक पर्दछ । जापान हुँदै नेपालमा यसको शुरुवात १९८८ वि.सं. मा भएको हो । अहिले नेपालका २६ जिल्लामा ट्राउट माछा पालन गरिएको छ र ५६ जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिएको छ । रसुवामा यो माछा पाल्न २०५८ सालमा शुरु गरिएको भए तापनि रेन्बो ट्राउट मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र (सरकारी कार्यालय) भने २०७१ सालमा मात्र स्थापना भएको हो ।
यस जिल्लामा व्यवसायिक ट्राउट माछा पालनमा ७–९ किसानहरू संलग्न छन् । यसको मुख्य खाना प्राउन हो र यो दाना अलि महंगो पर्नाले यसको बजार मूल्य पनि केही बढी पर्दछ । स्थानीय बजारमा कम्तिमा १ हजार ८०० सम्ममा बिक्रि हुन्छ भने सरकारी दर आधा सस्तो पर्न जान्छ । जुनसुकै खाले विरामी, बुढाबुढी, केटाकेटी जसले खादा पनि केही फरक नपर्ने यसका मूख्य विशेषताहरू रहेका छन् ।
सदरमुकाम पारीपट्टी भिरको बाटो केही अप्ठेरो पार गर्दै ठूलो भार्खु, सानो भार्खु हुँदै अगाडि बढ्दै जादा बाह्रघुम्ती पुगिन्छ । बाह्रघुम्ती हुँदै त्रिशुलीको किनारमा झर्नु पर्ने हुन्छ । एकै डाँडोमा १२ वटा घुम्ती बनाएर मोटरबाटो निर्माण गरिएको रहेछ । बनेपा–बर्दिवास सडक खण्ड (वी.पी. राजमार्ग) को झल्को दिने ठाउँझै देखिन्छ । उक्त स्थानको बाटो भने मोडमा बाहेक पक्की भएको पाइयो । बस्ती अत्यन्तै पातलो छ । बाटो खुलेपछि होटलहरूको शुरुवातसँगै बस्ती बसेको जस्तो देखियो । बाह्रघुम्ती कटेपछि स्याफ्रुवेंशी बजार आउँछ ।
स्याफ्रु बजार पुग्नुभन्दा अगाडि पुलको छेवैमा चिलिमे जलविद्युतको पावर हाउस देख्न सकिन्छ । यो हालसम्मकै सबैभन्दा सस्तो लागत (रु.२।१९) मा उत्पादन गरिएको पहिलो जलविद्युत आयोजना पनि हो । स्याफ्रुबेंशी यस जिल्लाकै एक मूख्य व्यापारिक तथा पर्यटकीय स्थल हो । यहाँबाट लामटाङ् हिमालतर्फ ट्रेकिङ जाने र क्याङ्जिङ् उपत्यका जाने बाटो रहेको छ । गोसाँइकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्र तथा कार्यालय, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको युनिटहरू पनि यसै ठाउँमा रहेका छन् ।
विदेशीहरूको मूख्य आश्रय स्थल तथा केरुङ् हुँदै आउने चाइनिजको लागि नेपालको प्रमुख गन्तव्य रहि आएको छ । विना पासपोर्ट र भिसा ३० किलोमिटरसम्म नेपालीहरू चीन र चिनियाँहरू नेपालमा चरिचरनका लागि आउने–जाने गर्न पाइन्छ । दुवै देशबीच सन् २०११ को सम्झौता अनुुसार रसुवागढीबाट स्यापु्रmबेंशी ३० किलोमिटर भित्रै पर्नाले पनि चाइनिजको मूख्य रोजाइमा पर्दछ स्याफ्रुबेंशी ।
त्रिशुली नदीको किनारै किनार बेत्रावतीबाट नुवाकोटको मैलुङ् हुँदै स्याफ्रुबेंशीसम्म आउने १७ कि.मी. दूरी भएको मूख्य व्यापारिक मार्ग हो । यस मार्गले जिल्लाकै आर्थिक सम्बृद्धिमा मेरुदण्डले जस्तै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । यही बाटो हुँदै चिनदेखि भारतसम्म र नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म व्यापार व्यवशायलाई प्रवर्धन गर्ने एक रणनैतिक उत्तर दक्षिण लोक मार्गको रूपमा समेत चित्रित गरिएको छ । गत वर्ष नै उद्घाटन गरिए पनि सूचारु गर्न सकिएको छैन । यसको मूख्य अप्ठ्यारो भाग नेपाली सेनाले निर्माण गरेको हो । कालिकास्थान–राम्चे–धुञ्चे हुँदै आउनु भन्दा यो मार्ग झण्डै ३०÷३५ कि.मी. छोटो अर्थात २÷३ घण्टा नै छिटो हुन्छ ।
स्यापु्रmबाट अगाडि बढेपछि टिमुरे नजिकै तातोपानी भन्ने स्थान आउँछ । यहाँ तातोपानीको मुहान भएको हुनाले नै तातोपानी भनिएको हुन सक्दछ । यस्ता तातोपानीका मुहानहरू नेपालका अन्य स्थानहरू म्याग्दी, सिन्धुपलाल्चोक, जुम्ला, लमजुङ्ग, मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, रुकुम आदि जिल्लाहरूमा पनि रहेका छन् । यहाँ २ वटा स–साना नुहाउने पोखरी बनाइएको छ । महिला र पुरुषका लागि भने नुहाउँने धारा एउटा मात्रै छ । त्यति व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गरेको पाइँदैन ।
तर पनि यहाँ नुहाउन आउनेको भिड राति, दिन, साँझ, बिहान जतिखेरसुकै रहिरहन्छ । मुहानकै पानी त उमालेजत्तिकै तातो छ । वरपर वाफ उडिरहेको देख्न सकिन्छ । पौडिदै नुहाउनको लागि चिसो र तातो पानीका छुट्टाछुट्टै पाइप मिलाएर सहन सकिने बनाइएको छ । विभिन्न रोग व्याधीहरू निको हुने आशा र विश्वासमा धेरै टाढाबाट पनि मानिसहरू नुहाउँनकै लागि आउँदा रहेछन् । यसै स्थानमा एउटा स्वास्थ चौकी र रसुवागढी हाइड्रो पावरको अफिस पनि रहेको छ । साथै पारी पट्टी सोही हाइड्रोको पावर हाउस बनाउने काम पनि भइरहेको छ ।
यसपछि हामी टिमुरे बजारमा पुग्यौँ । यो गोसाईकुण्ड गा.पा. वार्ड नं. २ को मूख्य बजार स्थल र केन्द्र पनि हो । यसै बजारको माथीपट्टी प्रसस्तै मात्रामा टिमुरै टिमुरको भएकोले टिमुरे भनिएको हो भन्ने कुरा बुझियो । यहाँ प्रहरी चेकपोष्ट, ने.रा.आधारभूत विद्यालय., इलाका हुलाक, गुम्बाहरू, क्वारिन्टिन कार्यालय, ५ वटा निजी बैङ्कहरू (नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, बैंक अफ काठमाडौं, जनता, सानिमा र नेपाल बंगलादेश बैंक), खाद्य गुणस्तर कार्यालय, रसुवा भन्सार कार्यालय, वडा कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी भन्सार सुरक्षा गुल्म, नेपाली सेनाको कालीजंग गण, राष्ट्रिय निकुञ्जको सेक्टर कार्यालय आदि रहेका छन् ।
भोटेकोशीको किनारमा कन्टेनरहरू राख्ने, आउने, जाने तथा समानहरूको भन्सार चेक जाँच गर्ने सुख्खा बन्दरगाहा रहेको छ । जहाँ धेरै नेपालीले रोजगारी पनि पाएका छन् । टिमुरेमा धेरैजसो सानाठूला होटलहरू, तरकारी तथा खाद्यान्न पसलहरू रहेका छन् भने मोटर बाटो त्यति व्यवस्थित देखिँदैन ।
पछिल्ला दिनहरूमा जिल्ला तथा देशकै मूख्य आय स्रोत भन्सार राजस्व बनेको छ । रसुवा भन्सार कार्यालय २०१३ सालमै स्थापना भए तापनि २०७१ मा रसुवागढी नाका सञ्चालन भएपछि र विशेष गरी भूकम्पले तातोपानी नाका बन्द भएपछि तथा २०७४ भाद्र १४ मा चिनले अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको मान्यता दिएपश्चात यस कार्यालयको उपादेयता आर्थिक वृतमा अझ बढ्दै गएको हो ।
चीनबाट तयारी कपडा, स्याउ, लेडिज सेण्डल, रबर, प्लाष्टिकका जुत्ता चप्पल, हाते झोला, छालाको जुत्ता, मोटरको ब्याट्री, युपीएस, प्लाष्टिकका सामग्रीहरू आयात हुने गरेको छ । त्यसैगरी नेपालबाट चीनतर्फ धातुको मूर्ति, काठका सामग्री, अम्रिसोको कुचो, बाँसको मुढा, मेहन्दी, दन्तमन्जन, श्रृंगारका सामान, चाउचाउ, पास्ता, जुस, जाम, चकलेट, ऊनीका गलैंचा, कार्पेट, चुइगम, हेयर आयल, हेयर किरिमलगायतका वस्तुहरू निकासी भइरहेको छ । टिमुरेमा अवस्थित यस कार्यालयको वार्षिक राजस्व आम्दानी ७ अर्बभन्दा माथी रहेको छ भने यस वर्ष तोकिएको लक्षभन्दा १४७% राजस्व असुली भएको पाइन्छ ।
अन्तिम नेपाली बजार
टिमुरेपछि सानो बजार घट्टेखोला आउँछ । यो बस्ती नै नेपालको अन्तिम बजार हो । यहाँ ३÷४ वटा राम्रै होटलहरू, अध्यागमन कार्यालय, सीमा प्रहरी चौकी आदि रहेका छन् । काठमाडौंबाट छुटेका बस तथा जीपहरूको गन्तव्य स्थल र काठमाडौंका लागि छुट्ने आरम्भ विन्दु पनि यहीँ स्थान हो । घट्टेखोला क्षेत्रमै रसुवागढी हाइड्रो पावरले आफ्नो अफिस राख्नको लागि थुप्रै भौतिक संरचनाहरू बनाएको भए तापनि भूकम्पले क्षति पु¥याएकाले यहाँ सुचारु नगरेर त्यतिकै छाडेको छ । उक्त भवनहरू निर्माणाधिन अवस्थामा छोडिउको हुँदा अहिले खण्डहरजस्तै बनेका छन् । तिनैमध्येको एउटा भवनमा जस्ता पाताले बारबेर पारेर सीमा प्रहरी चौकी, टिमुरेले सुरक्षा प्रदान गरेको छ ।
वि.सं. २०७१ सालमा स्थापित यो कार्यालय हरेक बिहान ८ बजेदेखि ४ बजेसम्म ३६५ दिन नै खुल्ने गर्दछ । विदेशी पर्यटकहरूको घुँइचो सिजन अनुसार हुन्छ र भुकम्पपश्चात कार्यचाँप बढिरहेको छ । मूख्यगरी विदेशी पर्यटकहरूको आगमन तथा प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्ने यस कार्यालयको काम हो । यसका अतिरिक्त यल बचचष्खब िखष्कब मार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पनि रहेको छ । त्यसैगरी सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई एक वर्षे स्थायी पास उपलब्ध गराउने र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई एक दिने पास पनि प्रदान गर्दछ । भुकम्पपश्चात सन् २०१५ देखि २०१८ को अन्त्यसम्ममा जम्मा ७६ हजार ३६३ जना पर्यटकहरू नेपाल भित्रिए भने सन् ०१८ मा १९ हजार ७१७ जना पर्यटक यहाँबाट विदेश प्रस्थान गरेको अभिलेख देखियो । यसैगरी ९ हजार ९०० भन्दा बढी स्थायी पासहरू बनिसकेका छन् । चिनिया पर्यटकलाई निःशुल्क भिसाको व्यवस्था गरिएको छ । यो वर्ष सन् २०१८ मा १ लाख १ हजार २२४ अमेरिकी डलर अर्थात ८५ लाख ४४ हजार १७१ रुपैया पैसा ३६ राजस्व खातामा जम्मा गरिसकिएको छ । भिषा शुल्क वापत सरकारलाई वार्षिक रूपमा हुने आम्दानीभन्दा कर्मचारीको तलव भत्ता र कार्यालय सञ्चालनका लागि हुने खर्च एक तिहाईले कम भएको पाइन्छ । अर्थात वार्षिक आयको १ हिस्सा बराबर मात्र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च हुन्छ ।
हाइड्रो हव र रसुवागढी हाइड्रो पावर
रसुवागढी किल्ला र नाकाको ५०० मिटर तलपट्टी रसुवागढी हाइड्रो पावरको ड्याम तथा तातोपानीमा पावर हाउस निर्माण भइरहेको छ । चिनियाँ कम्पनीले निर्माण कार्यलाई चौबिसै घण्टा लगाएर तिब्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समेत लगानी रहेको जिल्लाकै सबभन्दा ठूलो आयोजना यही हो । यसको विद्युत उत्पादन क्षमता १११ मे.वा. रहेको छ । हाईड्रो हवको रुपमा विकास हुँदै गरेको यस जिल्लामा सानाठूला गरी १२ भन्दा बढी जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यस जिल्लाबाट ६०० मे.वा.भन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन भई केन्द्रीय प्रसारण लाईनमा जोडिने तयारी रहेको छ ।
नेपाल चिन सीमा क्षेत्रमा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका वार्ड नं. २ मा उत्तरबाट ल्हेन्दे खोला र पश्चिमबाट केरुङ् खोला मिलेर भोटेकोशी बनेको सङ्गमनेर रसुवागढी किल्ला निर्माण भएको छ । वि.सं. १९१२ सालको युद्धको समयमा पहिलो पटक रसुवागढी किल्लाको निर्माण भएको हो । नेपाल र तिब्बतसँग भएको पटक पटकको युद्धमा यो गढी मूख्य रूपमा क्रियाशील भएको पाइन्छ । काठमाडौँबाट १४५ कि.मि. टाढा रहेको यही गढीकै नाममा जिल्लाको नाम रसुवा रहन गएको छ । यो किल्ला लामटाङ् राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ । यो गढी १.९ मि.देखि २.०५ मि.सम्मको क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने यस गढीको वरिपरी पुरानै ढाँचामा नेपाली सेनाले पर्खालको मर्मतसम्भार गरी २०७५ कार्तिक ५ गते राष्ट्रिय झण्डा समेत फहराइएको छ ।
रसुवागढी अन्तर्राष्ट्रिय नाका
घट्टेखोलाबाट १ किमी. अगाडि बढेपछि रसुवागढी किल्ला र नाकामा पुगिन्छ । त्यहीँ वरपर प्रहरी चेकपोष्ट, सशस्त्र प्रहरी चेकपोष्ट, माइती नेपालको चेकपोष्ट स्वास्थ्य जाँच हेल्पडेस्क, भन्सार युनिटलगायत वायाँपट्टीको बाटोमा अव्यवस्थित तरिकाले रहेका छन् । टिनको छाप्रो, ट्याङ्की आदिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नाकामा नेपाली कार्यालयहरूले मुस्कानसहित सेवाप्रवाह गरिरहेका छन् ।
पुलको नजिकै एकीकृत भवन बनाउनका लागि घडेरी तयार गरिएको छ । २०७२ सालको भूकम्पले आएको पहिरोबाट कर्मचारी, कामदार, कन्टेनर आदि पुरिएको स्थान पनि यहीँनेर हो । भृकुटीको विवाह गर्दा पनि यही बाटो प्रयोग भएको हो । प्राचीन कालदेखि नेपाल र भोटबीच चल्ने व्यापारको प्रमुख मार्गका रूपमा रहँदै आएकोमा चिनले २०७४ भाद्र १४ गते अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा मान्यता दिएपछि अझ परिचित हुँदै आएको छ । अहिले यही नाका हुँदै दैनिक करिब १०० कन्टेनरहरू आवत–जावत गर्दछन् ।
मध्यकालको उत्तरार्धसम्म पनि प्रमुख व्यापारी मार्गका रूपमा रहेको थियो । २०७१÷८÷१५ गतेदेखि द्विपक्षीय रूपमा विकास भएको यो नाका हाल नेपाल चीन प्रवेशको एक मात्र नाका हो । ल्हेन्दे खोला माथीे निर्मित पक्की पुल नेपाल चीन जोड्ने मितेरी पुलका नामले परिचित छ । आधा पुल नेपाल र आधा पुल चीनमा पर्दछ । पुलको बिच भागमा चिनको प्रविधयुक्त गेट रहेको छ भने वारीपट्टीको पुलको भाग भूकम्पले क्षति पु¥याएको छ । यहाँको ओहोरदोहोरको चापको आधारमा यस पुललाई भत्काई अझ चौडा बनाउने काम चीन सरकारबाट भइरहेको छ । धेरैजसो चिनिया पर्यटकहरू र गत वर्षदेखि कैलाश मानसरोवर जानेहरूले यही नाका प्रयोग गरेका छन् ।
चीन प्रवेश द्वार
हामीहरूलाई चीनको भव्य गेटसहितको एकीकृत भवनले स्वागत गरिरहेको छ । पहिलो नजरमै हामी धेरै पुलकित हुन्छौँ । चिनियाँ कार्यलाई हेर्दा र आफ्नो वारीपट्टीको हविगतलाई देख्दा जो कोहीले पनि धिक्कार्छौ नेपालीलाई । वारी र पारी अनकन्टार भिर भए पनि उता हेर्दा अत्यन्तै सुखद देखिन्छ । उनीहरूको चेकजाँच अत्यन्तै व्यवस्थित पाइयो । पारीपट्टी त्यहाँको टोलीले हाम्रो टोलीलाई स्वागत ग¥यो । जिल्लास्तरको सुरक्षा सम्बद्ध टोली द्विपक्षीय बैठक तथा केरुङ् भ्हउय द्दण्ज्ञड को उद्घाटनमा सरिक हुन गइरहेको थियो । पारीपट्टीको मोटरबाटो साँघुरो भइकन पनि अत्यन्तै सुन्दर लाग्यो । केरुङ खोलाको किनारै किनार ७÷८ कि.मि. अगाडि बढेपश्चात उकालोका घुम्तीहरूमा मोडिन थाल्यौँ । हाम्रो देशमा म्चष्खष्लन ीभात कष्मभ हुन्छ भने त्यहाँ च्ष्नजत कष्मभ मचष्खष्लन गर्नुु पर्ने हुन्छ ।
चिनियाँ विकास र हालको केरुङ्
चिनिया बाटोमा जाँदै गर्दा आएका अप्ठेरा, पहिरा भिर आदिमा आवश्यकता अनुसार सुरुङ्, पहिराभर नै ढलान, भित्तामा जाली आदि लगाएको पाइयो । ति बाटाहरू १÷२ वर्ष पहिले मात्र निर्माण गरेको भन्ने सुनियो । मेतेरी पुलदेखि २४ कि.मि. उत्तरतर्फ अत्यन्तै सुन्दर र फराकिलो स्थानमा आनन्दसँग घाम तापिरहेको अवस्थामा देखियो केरुङ् बजार । चौरीहरू बाटोको दायाँबायाँ आरामका साथ चरिरहेका पाइयो । विशेष गरी २०७४ पछि धेरै मात्रामा विकास निर्माणका भौतिक संरचनाहरू रातदिन लगाएर गरिरहेको देखियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएपछि सबै कुरामा थप व्यवस्थित हुँदै गएको रहेछ । बाटोमा कतै धुलो मैलो देखिँदैन । सरसफाईको अत्यन्तै राम्रो प्रबन्ध छ । हामीकहाँ फोहोर जताततै हुन्छ भने त्यहाँ सफा गर्ने मान्छेहरू जताततै हिँडिरहेका र फोहोर देख्नासाथ उठाईहाल्ने गरेको देखियो । सुरक्षाको बन्दोबस्तका लगि सुरक्षाकर्मीहरू बाक्लै गरी ओहोरदोहोर गरेको देखियो । कन्टेनरहरूमा सामान लोड गर्ने छुट्टै व्यवस्थित स्थान रहेको छ । विनापासपोर्टका नेपालीहरूलाई १ किमि अगाडि अर्को सुन्दर ठाउँ बाङ्सिङ्सम्म जान मिल्दछ ।
आँखै अगाडि हिमालको चाँदी सरहको चमक जतिखेर पनि हेरिरहुँजस्तो लाग्यो । छिट्टै १÷२ वर्ष भित्रमा चीनले यहाँसम्म रेल ल्याउने योजना सुनियो । नेपाली प्यागोडा शैलीको २÷३ वटा मन्दिरहरू पनि देखियो । साँझको भहउय त्यहीँ नेपाली मन्दिरको प्राङ्गणमा भव्य रूपमा उद्घाटन गरियो । साँँच्चै भन्दा यो बजार नेपालीहरूका लागि नै केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको छ ।
यहाँका अधिकांश पसल, होटल, मेसलगायतमा नेपाली कामदारहरू धेरै नै रहेका छन् । खासमा व्यापार व्यवशायका मालिक÷सञ्चालक चिनिया र कामदारहरू सम्पूर्ण नेपाली रहेको बुझियो । नेपालीका होटल तथा पसलहरू पनि छिटफुट रूपमा सञ्चालित छन् । नेपाली कामदारको ज्याला कम्तिमा ३०÷३५ हजार हुँदोरहेछ । अहिले रसुवा जिल्लाका अधिक मान्छेहरू यहाँ कार्यरत छन् । तेस्रो मुलुकमा गएका धेरै कम छन् र तेस्रो मुलुकबाट फर्केर पुनः यतैतिर आई काममा लागेको समेत पाइयो ।
यो ठाउँ हाम्रा पुर्खाहरूले तिब्बतीयनसँग लड्दै भिड्दै केरुङ् सन्धि गरेको स्थान हो । प्रतापसिंह शाहको पालमा भएको वाणिज्य सन्धि विपरित तिब्बतले सिक्किमको बाटो व्यापार गर्न लागेको, तिब्बतका विद्रोही समर्पा लामालाई नेपालले शरण दिएको जस्ता कारणले गर्दा सन् १७८८ मा नेपाल र तिब्बतबीच भयानक युद्ध भयो ।
दामोदर पाण्डे र बम शाहको नेतृत्वमा गएको नेपाली फौजले तिब्बती सेनालाई परास्त गरेकोले वि.संं. १८४६ जेष्ठ (२ जुन १७८९) मा केरुङ्मा दुई देशबिच भएको सन्धिलाई केरुङ् सन्धि भनिन्छ । यस सन्धिमा तिब्बतबाट १५ जना कालोन घोरिङ्, साकिया लामा, टेसु लामाजस्ता प्रतिनिधि र नेपालका तर्फबाट बम शाह, हरिहर उपाध्याय, नरसिंह शाह र समर्पा लामा थिए । तिब्बतले बर्षेनी नेपाललाई रु. ५७,६००। दिने, शुद्ध नुन दिने, बुद्ध धर्मप्रति भक्ति देखाउँन प्रतिवर्ष एक लामा नेपाल आउन पाउने, सिक्किम मार्ग बन्द गर्ने आदि शर्तहरूको व्यबस्था उल्लेख गरिएको थियो ।
हिन्दूहरूको महान आस्थाको तीर्थस्थल चिनको कैलाश मानसरोवर भ्रमण गर्न सन् २०१८ देखि विशेष गरी भारतीय र नेपालीलगायत अन्य देशका नागरिकहरूलाई रसुवागढी–केरुङ् हुँदै यात्रा गर्ने अनुमति चिनले दिन थालेको हो । भगवान शीवजीको बासस्थल एवम् तपस्थल कैलाश पर्वत नेपाली सिमादेखि ६०० कि.मि. टाढा रहेको छ । हप्ता दिनमा सिमा क्षेत्रबाट जान र आउन सकिने कुरा बुझियो । गत वर्ष ७२४७ जना गएकामा भारतीय मात्रै ६४५३ जना रहेका थिए ।
उत्तम मौका सधै आउँदैन । आएको बेलामा छोड्नु हुँदैन । ऐतिहासिक, धार्मिक, भौगोलिक, हिमाली संस्कृतिलगायत धेरै कुराको प्रत्यक्ष रूपमा आफैले देखेर अनुभव लिन सकिन्छ । यस मार्गको दायाँ बायातर्फ रहेका प्रसिद्ध एवम रमणीय स्थलहरूमा पनि समय मिलाएर जान सकेमा अझ पुण्य कमाउन सकिने अवस्था छ । यस तरिकाबाट काठमाडौंदेखि केरुङ्सम्मको रमाइलो यात्रा बर्णन गर्ने कार्यमा विभिन्न कोणबाट प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सहयोग पु¥याउँने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो वृतान्त पढेर देश विदेशको बारेमा अध्ययन अवलोकन गर्दै जान्ने बुभ्mने शुअवसरको सदुपयोग गर्न र यस रसिलो यात्रामा रमाउँनका लागि पनि विशेष अनुरोध र आग्रह गर्दछु ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, चैत्र १८, २०७५, ०४:०४:००